Ducada bogsashada si aad dhaqso ugu soo ceshato caafimaadkaaga. ?
Salaadda bogsashada si aad caafimaad dhakhso leh uga soo kabatidWaxay u timid in lagu dhammaystiro daawada ragga. Markaad tukanaysid, baahidaadu waxay sii adkaaneysaa Ilaah, kan hela jidka ugu wanaagsan ee lagu bogsiiyo.
Daaweyntani waxay noqon kartaa tixraac dhakhtar ka wanaagsan, tusaale ahaan. Xaaladaha qaarkood, waxay ka imaan kartaa helitaanka daaweyn cusub ama dawo. Bogsiinta waxay ku imaan kartaa xitaa mucjiso.
Si kastaba ha noqotee, si ay taasi u dhacdo, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo tukashada bogsashada adoo xooggaaga oo marwalba ku sii adkaynaya iimaanka aad ka bixi karto xaaladdan. Niyad jabku waa hubka ugu fiican ee lagaga hortago cudur kasta.
1 Salaadda bogsashada si aad caafimaad dhakhso leh uga soo kabatid
2 Duco caafimaad
3 Salaada Cudurka Salaada
4 Salaad xoog leh oo bogsiinta leh
5 U ducee qofka caafimaadkiisa.
6 U soo ducee Malaa'igta Kariimka ah ee Saint Raphael si aad u weydiisato bogsashada cudurka
7 U ducee Marwadayada Faadumo inay caafimaad weydiisato.
8 Muhiimadda salaadda bogsashada
In kasta oo dhakhaatiirtu ay mar hore indhaha u fureen suurtogalnimada yar ee bogsashada, Ilaah waxbana uma suurtoobin.
Salaadda bogsashada waxaad yeelan kartaa mucjisadaada oo waxaad ka takhalusi kartaa cudurka kaa dhigaya inaad aad u dhibtoonto.
Ka sokow Sabuurradii 133 iyo Archangel Raphael ducadiisa, oo aan hadda halkan ku tusnay, waxaa jira kuwa kale salaadda awood leh ee bogsashada. Hoos fiiri.
“Sayidow Aabbow, waxaad tahay takhtarka rabbaaniga ah. Waxaad siisaa nolosha iyo nolosha kuwa ku doondoona.
Taasi waa sababta maanta, Sayidow, si gaar ah, aan u doonayo inaan codsado daaweyn dhammaan noocyada cudurrada, gaar ahaan kuwa aniga xilligan igu dhiba.
Waan ogahay inaadan dooneynin shar, ma dooneysid cudurka maqnaanshaha caafimaadka, maxaa yeelay waxaad tahay kan ugu sarreeya.
Ii shaqee bogsashada xagga ruuxa ah iyo, haddii aad rabto, sidoo kale waa bogsiinta jirka.
Ha u been abuurto si toos ah ficilka xoogga leh ee Ruuxaaga Quduuska ah ama iyada oo loo marayo takhtarka iyo daawooyinka!
Iimaankayga u siyaadi Awoodaada, Sayidow, iyo jacaylkaaga infinito inaad aniga ii hayso Iimaankayga ii siyaadi, Rabbiyow, oo mararka qaarkood aad u itaal daran.
Waxaan aaminsanahay xooggaaga bogsashada, Ilaahayow, waana ku mahadsan yahay howsha aad qabatid oo dhan qalbigayga iyo jirkeyga hadda. Aamiin, saas ha noqotee!
Salaada Cudurka Salaada
“Eebow, jirkayga caafimaad i sii oo waxaan iskaashi la yeelan karaa nolol edbin leh si aan ugu qalmo gargaarkaaga.
Sayidow, sidaan kuu sharfay oo aan kugu wargaliyay mahadnaq iyo amaan, inta aad igu taajiriso, adoon iiga daynin waxaan ubaahanahay, adoo kuguuleysanaya guul weyn dhamaan safarada oo aan markasta fududaan.
Markaan kugu mahadnaqayo wanaag caynkaas ah, Sayidow, kuma mahad naqayo ereyada oo keliya, laakiin wax walba waxaa ka sarreeya nolosha quduusnimada.
Adiga oo ciqaaba kuwa aad jeceshahay, sida aabbaha ciqaaba wiilka caasiyiinta ah oo uu ku qiimeeyo, Waan kugu mahadnaqayaa wakhtiyadii aan dhibaataysnaa oo dhan markii aan dareemay in gacantaadu igu dhacay, laakiin had iyo goor naxariis badan.
Intee baan ka bartay oo aan kaa bartay, aabbahay!
Ma jiraan wax u dhigma jacaylkaaga.
Jidadyadooda waxaa lagu beeray magacyo badan, laakiin kuwa ku socda ayaa dareemi kara farxaddooda qaaska ah.
Salaad xoog leh oo bogsiinta leh
Sayidow Ciise, waxaan u malaynayaa inaad sara kacday oo aad soo noolaysay. Waxay ila tahay inaad joogtid karaamadii meesha allabariga inaad i quudisaan; Waxay ila tahay inaad ka jawaabto ducada kuwa kaa doondoona qalbiga oo dhan. Waan ku jeclahay oo waan ku ammaanayaa. Sayidow, waan kugu mahad naqayaa inaad timid inaad jeclaato aadanaha.
Qofna kuma hilmaami doono, waxaad tahay nolosha noloshayda, waayo adiga ayaa lagaa cafiyey, adiga oo kaashanaya waxaan booqdaa nabad iyo caafimaad. Xooggaaga igu cusbooneysi. Barakee baahiyadayda oo ii naxariiso.
Sayidow, i bogsii, Sayidow. Ruuxayga bogsii, oo guusha ka adkaata dembiga. Bogsii shucuurtayda, xidho nabarada ay sababeen nabarradeyda, nacaybka, jahwareerka ama xanaaq.
Jirkayga ayuu bogsadaa, wuxuu i siiyaa caafimaadkeyga jidheed.
Maanta, Sayidow, waxaan kuu soo bandhigayaa cudurrada aan ku xanuunsado: (kor u dhawaaq cudurradaada) waxaanan kaa codsanayaa inaad xor u ahaato sidii kuwii ku doonay goortii aad joogtay meeraheena.
Waxaan aaminsanahay inuu Ereygu ballanqaadayo: Isaga laftiisa ayaa dembiyadeenii ku qaaday jidhkeenna geedka dushiisa, si aan ugu dhiman karno dembiyada oo aan u noolaanno cadaalada; nabrahoodiina waad ku bogsateen. '(1 Pdr 2,24).
Waxaan aaminsanahay jacaylka aad ii qabtid, iyo xitaa natiijooyinka baryootankayga, waxaan kugu kalsoonahay iimaan: Aad baad ugu mahadsan tahay Sayidow ciise, ducadii aad horay iigu soo shubtay.
U ducee qofka caafimaadkiisa.
Waa Eebaha Caalamka, Abuuraha wax walbana.
Waxaan u imid joogitaankaaga boqortooyada waqtigan inaan ka codsado caawimaad ka timaada kuwa ku xanuunsada jirkooda ama maskaxda.
Waxaan ogsoonahay in jirada aan kuheli karno waqtiyo feker ah, oo si weyn noogu dooriya, noogu soo dhowaada adiga, adoo maraya waddooyinka aamusnaanta.
Laakiin waxaan ka baryeynaa naxariistiisa oo aan weydiisaneynaa: gacantaada iftiinka leh u gudbi kuwa jiran, xanuun la il daran, hubin la'aanta iyo xaddidaadda.
Aamin iyo aaminaad ha ku sii xoogee qalbiyadiina. Waxay yareysaa xanuunkooda waxayna siisaa nabad iyo xasillooni.
Naftaada bogsii si aad gacan uga geysato soo celinta jirkooda.
Sii iyaga raaxo, nasasho oo u soo jeedi iftiinka rajada qalbigooda si, iyagoo taageero ka helaya rajo iyo iimaan, ay dareemaan jacaylka adduunka.
Nabadu ha idinla jirto dhammaanteen.
U soo ducee Malaa'igta Kariimka ah ee Saint Raphael si aad u weydiisato bogsashada cudurka
«S. Raphael, oo magaciisu macnihiisu yahay "dhakhtarka Ilaah," adiga, oo lagu eedeeyey inaad la socotey Tobias dhallinyaradiisa safarkii uu ku aaday waddanka Medes, oo markii uu soo noqdayna bogsiiyey indho la'aanta aabbihii Tobias.
Saint Raphael, Adiga oo caawiyey oo caawiyey Tobias aabihiis inuu sameeyo himilooyinkiisa iyo himilooyinkiisuna inay rumoobaan, waan ku baryaynaa oo waan ku baryaynaa inaad naga caawiso.
Ilaahow ilaaliye hortiis, maxaa yeelay adigu waxaad tahay dhakhaatiirta sadaqada bixiya oo u soo dira aamintiisa.
S. Rafael, i daawee cudur kasta.
Had iyo jeer iga dhig caafimaad, maxaa yeelay kaa joojin mayno bixintaada. Waad mahadsantahay
U soo ducee Aabahayaga, Maryan Hail iyo Caqiidada.
U ducee Marwadayada Faadumo inay caafimaad weydiisato.
“Marwo Faadumo, hooyo jecel dhammaantiina ku silica jirka iyo nafaha.
Daryeelo caafimaadka carruurtaada, ka yaree xanuunnada iyo xanuunnada ina dhibaya ee naga go'na oo na wiiqaaya.
Weydii wiilkaaga aad jeceshahay ee bogsiiyey dad aad u tiro badan oo jidadkiisa wakhtigiisa ku jira, inuu noo naxariisto, oo uu noo noqdo xooggeenna. Dhibaatadeenu ha ku sii jirto isaga. Ilaahay caafimaad ha inaga siiyo marwalba isaga u adeega, oo is ilaaliya. Laakiin had iyo goor wax walba iyo had iyo goorba, in la sameeyo doonista Ilaaha Aabbaha ah, kaasoo innaga xannaaneeya jacayl aan dhammaad lahayn iyo naxariis daran. Gacantaada na qaado, Hooyo gacaliye, oo na Jesus u tag
Muhiimadda salaadda bogsashada
Markaan bukoonno, ha ahaato jir ahaan, ruux ahaaneed ama maskax ahaanba, waxaan ku xirnaa rajo xumo. Xanuunkan ayaa sidoo kale na garaacaya markii uu jiro qof la jecel yahay oo dhibaatooyin caafimaad qaba. Daqiiqadahaas, annagoo og inaan haysanno qof aan u jeesanno waxay na siisaa xasillooni.
Ilaah weligiis kama tago carruurtiisa. Sidaa darteed, muhiimadda salaadda bogsashada ayaa ah inay ina siiso raaxo. Tukashadani waxay keenaysaa xasillooni iyo rajo xilliyadan adag.
Marar badan waxaan nafteenna ka helnaa Ilaah hortiisa innagoo aan garanayn sida loo codsado bogsigeenna, luuqaddee loo isticmaali doonaa. Salaadda bogsiintu waxay keenaysaa ereyada saxda ah ee, haddii si caqiido ah loogu hadlo, ay lahaan doonto awood weyn oo ay ku bogsiiso.
Ku raaxayso in lagu dhex tukado salaadda bogsashada si aad caafimaadkaaga si dhakhso leh uga bogatid oo aad wax badan uga baratid dhammaan noocyada saddexaad ee jira.